Cali Khaliif iyo Saleymaan Xaglatoosiye ku loolmaya Buuhoodle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Buuhoodle – Mareeg.com: Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiirka caafimaadka Somaliland Suleymaan Ciise Xagla-toosiye ayaa degmada Boohoodle ee gobolka Togdheere oo ay kasoo wada jeedaan ka wada loolan uu mid kasta doonayo inuu kusoo jiito bulshada degmadaas.
Cali Khaliif Galeyr iyo xubno ka yimid degmada Taleex oo ka horjeeda maamulka Somaliland iyo Suleymaan Xagla-toosiye ayaa isugu tegay degmada Buuhoodle, waxaana markaas kadib magaalada ka dhacay debadbax ka dhan ahaa Xagla-toosiye oo horay ugu biiray maamulka Somaliland.
Cali Khaliif ayaa ka hadlayay dibadbax ka dhacay magaalada Buuhoodle oo boqollaal dadweynaha ku dhaqan ay asaga ku soo dhoweynayeen booqashada uu ku tegay magaalada. Wuxuu socod ku maray suuqyada iyo qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Buuhoodle.
Cali Khaliif Galeyr ayaa dhinaca kale sheegay inay marka ay dhisaa maamulka Khaatumo ay diyaar u yihiin inay wadahadal la galaan maamulka Soomaaliland.
“Dadku ma diidaan in la yiraaho Puntland baa wadahadal lala galayaa, balse way ka boodaan markay maqlaan Somaliland baa lala hadlayaa, Somaliland waa mida naga heysata dhulka hadii ay ka baxaan dhulkeena wadahadal baanu la galaynaa inagoo maamul wadana, maaha tii hal hal qof u tagi jiray maamulkaa…” ayuu yiri Cali Khaliif .
Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka Somaliland, Saleebaan Ciise Axmed Xagla-toosiye oo isna ku sugan magaalada ayaa kormeeray xarumaha caafimaadka ee Buuhoodle.
Xagla-toosiye ayaa warbixinno ka dhageystay howlwadeennada caafimaadka, kuwaas oo soo bandhigay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka.
Wuxuu ballan-qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyaha caafimaad ee ka jira magaalada, isagoo dhinaca kalena dhagax-dhigay xarun uu sheegay inuu ka dhisi doono machad lagu baarto cilmiga caafimaadka.
Wuxuu sidoo kale degmada Buuhoodle geeyey gaari Ambalaas ah oo loogu talagalay gargaarka degdega ah, kaasoo ka mid ah sida uu yiri 5 gaari uu hay’adda Turkiga ee TIKA ugu deeqday Somaliland.
Xagale-toosiye ayaa wareysi uu siiyey BBC-da ku sheegay in Cali Khaliif Galeyr uu soo booqday hooyadiis oo magaalada degen, isla markaana aan laga ogolaan doonin inuu khal khal geliyo amniga, waa siduu hadalka u dhigay.
Qaar kamid ah Issimada deegaanka ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya siyaasada inaysan khal khal gelin amniga magaalada Buuhoodle, waxayna ugu baaqeen in laga fogaado wax walba oo keeni kara inuu dhiig ku daato magaalada.
Wafdiga ka yimid Taleex ee ku sugan Buuhoodle ayaa ku eedeeyey Wasiirka Caafimaadka Somaliland Xaglatoosiye inuu Buuhoodle u tegay sidii uu carqaladeyn lahaa shirka ay wadaan abaabulkiisa ee dib loogu habeynayo maamulka Khaatumo.
Degmadan Buuhoodle ayaa ka mid ah degmooyinka ay ku murmaan Somaliland, Puntland iyo Khaatumo, waxaana dadka degan yihiin dad taageersan midnimada Soomaaliya, hase ahaatee siyaasiyiinta kazoo jeeda degmadaas ayaa la kala safan dowladda federaalka Soomaaliya, maamullada Somaliland, Puntland iyo Khaatumo.